Tirada dadka ku baracakay gudaha dalka Koongo oo laba laabmatay - BBC News Somali
Tirada dadka ku baracakay gudaha dalka Koongo oo laba laabmatay
Image caption Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo qulqulatada barakicisay malaayiinta qof
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka ku barakacay colaadda ka aloosan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ay laba laabmatay lixdii bilood ee la soo dhaafay oo ay gaartay ku dhawaad afar milyan.
Maleeshiyo ka soo jeeda qowmiyad dalkaas deggan ayaa hubka u qaadatay inay la dagaalamaan ciidammada dowladda ee saldhigyada ku leh koonfurta gobolka Kasai, kaddib markii la dilay suldaanka qabiilkooda.
Wax isbadel ah kuma aanay iman dhibaatada soo gaaraysa dadka ku nool dalka Koongo tan iyo markii ay ku dhawaad lixdan sano ka hor xorriyadda ka qaateen gumeystihii Belgium-ka.
Mowjadahan ugu dambeeyay ee dadka soo barakacay ayaa waxa ay tirada dadka dalkaasi ku barakacay oo markii hore aheyd 2 milyan oo qof waxa haatan ay ka dhigaysaa 3 milyan iyo sideed boqol oo kun oo qof oo soo barakacay muddo lix bilood gudahood ah, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Qulqulatooyinka ayaa Sibteembartii la soo dhaafay ka bilowday gobolka Kasai kaddib dilkii loo gaystay suldaan ay laheyd beel halkaa degta kaas oo ka soo horjeestay Madaxweyne Joseph Kabila.
Waxaa si weyn u jiray eedo ah in la gaystay dil aan loo aaba yeelin, kufsi iyo jirdil inta badan lagu eedeeyay inay gaysteen maleeshiyaad gacan saar la leh dowladda.